भोलि खुल्ने भनिएको चीनसहितका देशमा हवाइ उडान अनिश्चित | Online News Portal in Nepal. Aba Bishesh Khabar, Harekpal Special Khabar.
भोलि खुल्ने भनिएको चीनसहितका देशमा हवाइ उडान अनिश्चित
२०७८ जेष्ठ १७, सोमवार, ५: ०८PM
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एक साताअघि मन्त्रिपरिषद्बाट १८ जेठबाट तीन मुलुकका लागि नियमित हवाइ उडान खुलेको जानकारी गराएका थिए । तर, सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अहिलेसम्म पुगेको छैन । जसले गर्दा तत्काल नियमित हवाई उडान नहुने निश्चित भएको छ । १४ जेठमा मन्त्री ढकालले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चीन, कतार र टर्कीमा नियमित उडान खुल्ने निर्णय भएको सार्वजनिक गरेका थिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन अझै एक साता लाग्ने जानकारी दिए । ‘नियमित उडान खोल्ने निर्णय त भयो, तर उडान व्यवस्थापनसम्बन्धी तयारीका काम परा नभएका कारण भोलिबाट नै उडान नहुने भयो’ उनले भने ।
अधिकारीका अनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, वायुसेवा कम्पनीलाई दिने उडान अनुमति संख्या लगायत विषयको टुंगो अझै लागेको छैन । जसले गर्दा १८ जेठदेखि तीन मुलुकमा हुने भनेको उडान नियमित नहुने निश्चित भएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार सोमबारसम्म उडान सञ्चालन गर्नेबारे कुनै निर्णय आएको छैन ।
सोमबार वा मंगलबार निर्णय आएपछि उडान व्यवस्थापन मिलाउन कम्तीमा एक साताको समय लाग्छ । सोही कारण एक साता तोकिएका मुलुकमा समेत नियमित उडान नहुने निश्चित भएको हो ।
अघिल्लो लेखमाएसईई परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनबाट गराउन शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव
अर्को लेखमा४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध, श्रावण १ देखि लागू हुने